I-aple iphone x yokuvavanywa kobomi bebhetri ngokuthelekisa i-iphone 8 kunye, umnyele we-samsung
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPhone X yovavanyo lobomi bebhetri ngokuthelekisa i-iPhone 8 Plus, i-Samsung Galaxy
I-Apple iPhone X iza ne-brand entsha ye-2,716 mAh ibhetri ithatha ubume obungaqhelekanga be-L Kwaye kucacile ukuba iApple yenze elona thuba lifumanekayo ukuxinana kwiseli enkulu yebhetri. I-apos ayinkulu njengeefowuni ze-Android, kodwa inkulu kunebhetri ye-iPhone 8 Plus.
Ke buyintoni kanye kanye ubomi bebhetri kwi-iPhone X?
Sichithe iintsuku ezimbalwa ngefowuni eyi- $ 1,000 kwaye sibalekile kuvavanyo lwethu lwebhetri ukufumana amanani. Kodwa okokuqala, nantsi indlela ubungakanani bebhetri ye-iPhone X ngokuthelekisa ezinye ii-iPhones kunye neebhetri zeefowuni ze-Samsung Galaxy:
Ifowuni ye-X 2,716 mAh
I-iPhone 8+, 7+, 6s + 2,675 mAh I-2,900 mAh I-2,750 mAh
I-Samsung Galaxy S8, i-S8 +, Qaphela i-8 3,000 mAh I-3,500 mAh I-3,300 mAh
Kumava ethu, ibhetri ye-iPhone X iya kugcina abasebenzisi nakwezo ntsuku zinde, kodwa kuya kufuneka uphinde uyilayishe ifowuni yakho rhoqo ebusuku.
I-iPhone X isebenzisa ibhetri emile njengo-L, umfanekiso ngu-iFixit
Sijonge ubomi obungcono bebhetri kunale nto uyifumanayo kwi-iPhone 8 encinci, kodwa hayi njengexesha elide lokuphila ixesha elide njenge-iPhone 8 Plus enkulu.
Ayizukuhlala ixesha elide njenge-iPhone 8+, kodwa iya kukufumana ngokulula usuku olude
Ukuqinisekisa amava ethu, sibaleke kuvavanyo lwesiko olulinganisa ukusetyenziswa kwesiqhelo kwifowuni. Senza olu vavanyo kuzo zonke iifowuni esiziphononongayo kwaye sibeka iifowuni kwiimeko ezilinganayo.
I-iPhone X ifumene iiyure eziyi-8 kunye nemizuzu engama-41 kuvavanyo lwethu, ingcono kancinci kunenqaku eliqhelekileyo lefowuni yeflegi ka-2017. Uyayibona ukuba ithelekiswa njani nezinye iiflegi eziphambili kwitshathi engezantsi.
Ubomi bebhetri(iiyure) Ephakamileyo kungcono I-Apple iPhone X 8h 41 imiz(Kulungile) I-Apple iPhone 8 Plus 10h 35 imiz(Egqwesileyo) I-Apple iPhone 8 8h 37 imiz(Kulungile) Isamsung Samsung Note8 7h 50 imiz(Umyinge) I-Samsung Galaxy S8 + 8h(Umyinge) I-LG V30 9h 34 imiz(Kulungile) I-Google Pixel 2 XL 8h 57 imiz(Kulungile)
Enye into ebalulekileyo kumava ebhetri lixesha elithathayo ukutshaja ibhetri. I-iPhone X iyakuxhasa ukutshaja okukhawulezayo, kodwa isahamba ngenqanawa endala, & apos; slow ', 5-watt tshaja ebhokisini. Ukuba ufuna ukusebenzisa ngokupheleleyo amandla amatsha okutshaja ngokukhawuleza kwe-iPhone X, kuya kufuneka uthenge ngokwahlukeneyo iadaptha yamandla ye-Apple USB-C ($ 50) kunye ne-USB-C kwintambo yombane ($ 25). Ngenye indlela, uya kufumana isantya sokutshaja ngokukhawuleza ukuba usebenzisa itshaja ye-iPad, kodwa iadaptha yamandla ye-USB-C iyafuneka ukuze ubize amandla ngokukhawuleza.
Sisebenzise itshaja yesiqhelo eza ebhokisini nge-iPhone X, nantsi ke kuthathe ixesha elingakanani ukubiza ibhetri ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100% usebenzisa le tshaja.
Ukutshaja ixesha(imizuzu) Ezantsi kungcono I-Apple iPhone X 189 I-Apple iPhone 8 Plus 178 I-Apple iPhone 8 148 Isamsung Samsung Note8 102 I-Samsung Galaxy S8 + 99 I-LG V30 108 I-Google Pixel 2 XL 152
Ewe, loo nto yeyokuxhwitha ixesha elide kunye nemizuzu emi-9! Ezo zantya zicothayo azinamsebenzi kangako xa ushiya ifowuni yakho itshaja kwindawo yokuma ebusuku, kodwa ukuba ufuna ibhetri ekhawulezayo emini, ezo zantya zinokucotha kakhulu.
I-iPhone X ikwaxhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kweQi. Iya kusebenza kunye neeshaja ezininzi ezingenazingcingo ze-Qi, kodwa akukho tshaja ingenazingcingo ifakiwe ebhokisini. Ukuze usebenzise olu phawu, kuya kufuneka uthenge iqela lesithathu elingenazingcingo. Ungayifumana ngo-Mophie okanye ngo-Belkin nge-60 yeedola kwiVenkile ye-Apple, okanye ufumane enye ngexabiso eliphantsi ngesiqingatha seli xabiso kwiinkampani ezinje ngeRavpower kunye neAnker ethengisa kwiAmazon nakwiBest Buy.
I-Apple iPhone X
iglasi yegorila 5 uvavanyo ekuqaleni
I-s8 vs s8 + ubomi bebhetri
I-Apple Watch Series 5 vs Samsung Galaxy Watch Active 2
I-Nexus 6P isebenzisa umthetho omtsha ukuvula i-bootloader
Isamsung kwintengiso ye-S21 FE njengenqaku lama-20 endaweni yentengiso ebuthathaka ye-S21
Emva kokugubungela i-5G, ngoku i-T-Mobile ibetha iVerizon kunye ne-AT & T kwenye i-metric ephambili
I-T-Mobile Essentials vs T-Mobile EYODWA: leliphi elona cebo lilungileyo?
I-Sprint ingaqala ngokunikezela ngenkonzo yasimahla yeHulu kubathengi abangenamkhawulo
Ityala leTech21 kunye neapos; ii-iPhone 7 zibeka ukhuseleko phezulu kuluhlu lwabo oluphambili
I-Galaxy Note 8 vs iPhone 7 Plus: jonga kuqala
I-iPhone 12 yeyona fowuni ilungileyo ye-5G yokuthengela i-Verizon kunye ne-AT & T izicwangciso zenethiwekhi ngoku